Health Share of Oregon | Coronavirus (Somali)
Balanqaadkeena xubnaha ku aadan: Health Share adiga ayay halkaan kuu joogaan, haddii aad jirran tahay iyo haddii aad caafimaadqabto.
Waan ognahay inaad ka walaacsantahay fayo-qabka qoyskaaga iyo bulshada, oo waan kula qabnaa walaacaaga. Balanqaadkeena adiga kugu aadan, iyo adeegyada aan bixino, waa joogto.
Macaashyadaada Health Share isma beddelin, oo waxaa ku jiro caymiska wax walba oo la xiriiro Korona Fayras (COVID-19). Waxaad weli heli kartaa shabakada gobolka ugu weyn ee dhaqaatiirta iyo isbitaalada. Waxaad weli haysataa caymiska daryeelka aad uga baahantahay Qorshaha Caafimaadka Oregon, oo bilaash kuu ah. Oo haddii dhakhtarkaagu ku taliyo tijaabada ama u baahantahay daryeel ama isbitaal geynta cudurka COVID-19, waxaad kaa daboolaya Health Share.
Illaheena loogu talagalay Xubnaha:
Haddii dhakhtarkaaga aaminsanyahay inaad u baahantahay in lagaa baaro fayraska, ma jirto anxixin hore oo loo baahanyahay. Waxaa jiro yaraanshaha baaritaanada qaranka, marka dhakhtarkaaga wuxuu ku siin karaa tilmaamaha daryeelka iyadoo aysan jirin ku talinta baaritaan. Fadlan raac tilmaamaha dhakhtarkaaga.
Haddii dib laguugu qoro daawada, waxaan ku kordhineynaa qoraalkaaga daawada 60 maalmood daawo u dhiganta. Waxaad sidoo kale buuxin kartaa qoraalkaaga daawada xilli hore.
Health Share waxay ku siineysaa helitaanka farmashiiyada boostada looga dalbado si markaas aad uga heshid qoraalkaaga daawooyinka oo si toos ah laguugu keeno boosto ahaan. La xiriir qorshaha caafimaadkaaga si aad isaga diiwaangelisid.
Ballamaha Wicitaan ama Shabakadeed
Waxaan balaarinay helitaanka adeegyada khadka caafimaadka iyo khadka daawada. Tani waxaa laga wadaa inay kuu suurtogaleyso inaad heshid daryeel—oo ay ku jiraan la talinta caafimaadka maskaxda iyo taageerada isticmaalka muqaadaraadka—wicitaan ama shabakad ahaan beddelkii aad aadi laheyd xafiiska bixiyayaashaada. La xiriir bixiyayaasha si aad wax badan u ogaato.
Adeegyada Gaadiidka Caafimaadka Aan Degdega aheyn waa la heli karaa. Sababtoo ah waxaa hadeer jiro tiro wacitaan sareeyo, waxaan la kullannaa in ka badan daahitaanada wacitaannada caadiga ah. Fadlan isticmaal foomka codsiga shabakada ku jiro haddii aad u baahantahay gaadiid aad u raacdid ballantaada, laakin kahor intaadan sameyn, soo wac bixiyahaaga si aad ugala hadashid haddii imaanshaha ballantaada weli lagu talinayo. Fadlan dib u qorsheyso ballamaha aan degdegga aheyn. Bixiyahaaga wuxuu sidoo kale soo jeedin karaa ballan wicitaan beddelkeeda.
Xiritaanada iyo jaheynada ka imaanayo gobolka iyo maamulada qaranka
Ka eeg mareegta cudurka COVID-19 ee Gofonatooraha wixii xeerarka iyo tallooyinka ugu dambeeyay ah.
Is-llaali oo ha ahaadaan qaraabadaada caafimaadqab
Waayeelka iyo dadka qaba xaaladaha caafimaadka daran ee raaga sida cudurka wadnaha iyo sambabka ama sonkorta waxay u muuqdaan inay halis sareyso ugu jiraan ka qaaddida dhibaatooyin aad halis u ah cudurka COVID-19. Fadlan kala tasho daryeel-bixiyaha caafimaadkaaga wax ku saabsan tallaabooyinka dheeraadka ah ay tahay inaad qaadid si aad u ilaalisid nafsadaada.
Ogow Siduu u Fido
Hadeer ma jiraan wax tallaalo ah oo looga hortago cudurka korona fayraska 2019 (COVID-19).
Qaabka ugu wanaagsan ee la isaga ilaaliyo jirrada waa ka fogaanshaha u baylah noqoshada fayraskan.
Fayraska waxaa loo maleeyaa inuu ku fido inta badan qof-ku-qof.
Dadka taabashada dhow isla yeeshay (oo qiyaastii 6 fiit gudahood).
Ka qaaddida dhibcaha dheecaanka neefsiga la soo saaro markuu qof qaba cudurka qufaco ama hindhiso.
Dhibcahaan dheecaan waxay geli karaan afka ama sanka dadka u dhow ama sida suurtogalka ah gudaha ugu neefqaato sambabada.
Nadiifi gacmahaaga inta badan
Ku dhaq gacmahaaga inta badan saabuun iyo biyo ugu yaraan 20 il-biriqsi gaar ahaan kadib markii aad joogtay goob bulsho, ama kadib siinsashada, qufacida, ama hindhisida.
Haddii saabuun iyo biyo diyaarsan la heleyn, isticmaal jeermis-dilaha gacmaha oo ka kooban ugu yaraan aalkolo 60%. Ka dabool dhammaan gacmahaaga sagxadaha oo is wadamari ilaa ay ka qalalaan.
Ka fogow ku taabashada indhahaaga, sankaaga, iyo afkaaga gacmo aan dhaqneyn.
Ka fogow taabashada dhow
Ka fogow taabashada dhow ee dadka jirran
U jirso masaafo inta kuu dhaxeyso adiga iyo dadka kale haddii cudurka COVID-19 ku fidayo bulshadaada. Kani gaar ahaan wuxuu muhiim u yahay dadka halista sareyso ugu jiro inay aad u jirradaan.
Guriga joog haddii aad xanuunsantahay, marka laga reebo helida daryeelka caafimaad. Baro waxa la sameeyo haddii aad xanuunsantahay
Wax badan ka akhri Xarumaha Kahortagga iyo Xakameynta Cudurka (CDC) wax ku saabsan waxa aad sameyn kartid si aad u ilaalisid nafsadaada iyo qaraabadaada.